Sida loo sameeyo hal-ku-dheg: waa maxay hal-ku-dhegga iyo sida loo abuuro tillaabooyin kala duwan | Hal-abuurka khadka tooska ah
Qaybta xayaysiisyada, had iyo jeer waxaa jiray cinwaano yaryar, oo ka kooban 2 ilaa 5 kelmadood, kuwaas oo soo koobay wax kasta oo daawadaha u baahan yahay inuu ogaado hal jumlad oo yar. Weedhan waxaan u naqaannaa halkudheg oo ay aad u badan tahay in lagu arko xayaysiis kasta ama calaamad gaar ah.
Laakiin, qoraalkan uma aanan imaan inaan ka hadalno xayeysiinta, inkasta oo aan sidoo kale magacaabi doono. Laakin halkudheggii. Haddii ay dhacdo inaad had iyo jeer la yaabban tahay sida loo naqshadeeyo, waxaan kuu keenaynaa furayaasha iyo talooyinka ugu fiican ee aad ku samayn karto. Diyaarso warqad iyo qalin oo qor wax kasta oo iman doona sababtoo ah waxay noqon doontaa mid aad u xiiso badan.
1 Halkudheggu: waa maxay
1.1 Hawlaha iyo astaamaha
2 Sida loo naqshadeeyo hal-ku-dheg
2.1 Samee astaanta
2.2 Waqtigaaga qaado
2.4 Kaliya diiradda saar fariinta
2.5 Isticmaal walxaha sida qaafiyad ama qaafiyad
3 Noocyada halkudhigyada
3.1 Kala duwanaanshaha
3.2 Xog ogaal ah
3.3 u baahan jihayn
3.4 dadwaynaha u janjeedha
Halkudheggu: waa maxay
Hal-ku-dhegga, sidaan hore u soo sheegnay. Waxaa loo yaqaanaa nooc ka mid ah weedha gaaban oo ujeeddadeeda ugu weyni ay tahay in farriinta lagu soo koobo erayo kooban iyo, ka sii sarreeya, in la xasuusto. Hal-ku-dheg wanaagsan ayaa loo qaabeeyey si sax ah haddii ay fududahay in la xasuusto, haddii xitaa ka dib markaan aragnay in ka badan shan xayaysiis oo isku xigta aan weli awoodno inaan xasuusano. Sida aynu horeba u qaadanay, halku-dheggu aad buu ugu dhex jiraa xayaysiiska, in kasta oo uu had iyo jeer lahaa ujeeddooyin kala duwan, tusaale ahaan, waxa kale oo uu si dhow ugu xidhan yahay arrimo siyaasadeed ama ganacsi.
Marka la soo koobo, halhaysku waa shay aad muhiim u ah oo soo koobaya fariin xayaysiis gaar ah. Sababtan awgeed, waxaan had iyo jeer u muuqdaan inay sidoo kale ka helaan noocyada qaarkood. Waxaa jira calaamado, ka dib abuurista waxa aan u naqaanno aqoonsiga shirkadda, sidoo kale naqshadeeya hal-ku-dheg kooban oo tix-raac u noqon doona soo jiidashada dareenka bulshada iyo in uu ku xidhan yahay astaanta. Hoos waxaan ku sharixi doonaa hawlaha ugu muhiimsan ee hal-ku-dhigga iyo qaar ka mid ah sifooyinkiisa ugu wanagsan, si aad daqiiqadaha ugu horreeya u fahanto sida ay saamaynta ugu yeelanayaan iyo saamaynta ay ku leeyihiin warbaahinta kala duwan.
Ujeedada ugu weyn ee hal-ku-dhiggu waa in la soo jiito dareenka dadweynaha. Sidaa darteed, waa in ay noqotaa mid shaqaynaysa marka ugu horeysa ee la naqshadeeyo. maadaama ay tahay in dhammaan daawadayaasha ay xasuustaan. Sidan, waxay ku saabsan tahay gaaritaanka muuqaal weyn oo weyn labadaba badeecada iyo summada la xayaysiiyay. Laakiin waxaas oo dhan ka sii horraysa, waa in ay dadweynaha ka dhaadhicisaa in badeecada la iibinayo ay lama huraan tahay oo ay buuxisay shuruudaha calaamaddu sheegtay.
halhayskii waa in uu ahaado mid gaaban oo kooban intii suurtagal ah. Sidaa darteed, waa in ay ka kooban tahay laba ilaa 5 kelmadood.
Sidoo kale waa in ay noqotaa mid indho-qabad leh, waa in ay ka qaybqaataan soo jiidashada dareenka dhammaan dadweynaha akhriya oo ku dhiirigeliya inay iibsadaan alaabta la dalacsiiyay.
Si ay dhammaan dhinacyadu u midoobaan. halhaysku waa inuu noqdaa mid cad oo toos ah. Farriinta ku kicinaysa wax kasta oo aad rabto inaad ku wada xidhiidho kaliya 4 kelmadood ama xitaa 2. Si taas loo sameeyo, waa inaan marka hore ka fikirnaa waxaan rabno inaan u sheegno dadka kale.
Halkudhig wanaagsan ayaa sidoo kale ah curiye soo jiidanaya dareenka, inta wanaagsan sida xun. Sababtan awgeed, waa inay gudbisaa dareemo iyo shucuur kala duwan.
Marka aynu halku dhigno Waxaa lagu xisaabtamayaa inay tahay hal-abuur iyo asal. Hal-ku-dhegyada ugu wanaagsan ayaa lagu sifeeyaa.
Sida loo naqshadeeyo hal-ku-dheg
Kahor intaanan galin si aan u naqshadeyno hal-ku-dhig suurtagal ah, laakiin marka hore waa inaan naqshadeynaa astaanta. Astaantu had iyo jeer way timaadaa marka hore sababtoo ah waxay noqon doontaa waxa ku siin doona dabeecadda iyo fariinta hal-ku-dhigga. Hal-ku-dheg la’aani ma jiro sumad la’aan iyo sumad la’aan. Sidaa darteed, waa wax ay tahay inaan caddeeyo marka ugu horeysa. In lagu bilaabo hal-ku-dheg iyada oo aan marka hore la naqshadayn calaamad waa khalad, in kasta oo ay u muuqan karto wax la yaab leh in la arko, noocyo badan ayaa sameeyay taariikhda oo dhan.
Hal-ku-dheggu maaha wax galabtii la nashqadeeyey, iyo xataa maalinba. Laakiin waxaad ku qaadan kartaa bilo iyo bilo inaad ka shaqeyso si aad u abuurto halhays. Hal-ku-dhegga ka hor, waxa jira weji horudhac ah oo cilmi-baadhis ah oo ku saabsan astaanta aad samaynayso. Taasna waxaa lagama maarmaan ah in aad dulqaad ku heshid, waayo halku-dheggu ma soo baxayo marka hore ee waxa lagaa rabaa in aad imtixaano iyo sawir-gacmeedyo badan samayso, oo aad mooddo calaamad.
Talada kale ee aanu ku siinayno waxa weeye in marka aad hal-ku-dheg ama hal-ku-dhegyo suurtogal ah haysato aad hayso ilaa aakhirka. Si fudud ha u baabi'in hana uga takhalusin, sababtoo ah wakhti ka dib waxay noqon karaan kuwo muhiim ah mar kale. Ka dib oo dhan, maaha sawirro ilaaliya qaabab isku mid ah, laakiin halkii aan ka hadlayno fikradaha, ereyada loo beddelay si ay macno u siiyaan kuwo kale oo badan. Sababtan awgeed, ereyadan ama fikradahan ayaa dib u soo cusboonaada wakhti ka dib sidii inay yihiin baytari oo dib loo isticmaali karo si macne loo siiyo waxaad samaynayso.
Kaliya diiradda saar fariinta
Waxa jiray calaamado ka fogaaday waxa ay shirkadu lafteedu rabtay inay la xidhiidho dhegaystayaasheeda iyo daawadayaasheeda. Sidaa darteed, waxaanu ku baraarujinaynaa in fariintu ay tahay inay mar walba maskaxdaada ku jirto. Waa inaad ogaataa in wax kasta oo aad naqshadayso ay u socon doonaan fariinta aad rabto inaad dadka kale siiso. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah inaad taqaanid sida loo aqoonsado waxaad rabto inaad sheegto oo aad u sheegto daqiiqadda ugu horreysa ee aad naqshadayso. Waa in aad sabab iyo amar macquul ah siiso wax kasta oo aad samayso. Waqti ka dib waxaad ogaan doontaa inay lagama maarmaan u tahay astaantaada.
Isticmaal walxaha sida qaafiyad ama qaafiyad
Ka dib markii la sameeyo fikrado ballaadhan oo la mideeyo. Waxaad u baahan doontaa inaad maskaxda ku hayso qaafiyad ama qaafiyad suurtogal ah. Waxa cilmi ahaan la caddeeyey in halkudhegyada ugu wanaagsani ay yihiin kuwa ay ku jiraan qaafiyad yar oo xarfaha iyo xarfaha u dhexeeya. Hagaag, hees ama cod ayaa ka fudud in lagu sii jiro maskaxdeena in ka badan halhays fudud. Halkani waa meesha asalka iyo hal-abuurka ay calaamad kastaa rabto inay bixiso hal-ku-dhiggeeda. Waxaa habboon in aad xisaabta ku darsato waxyaabahan.
Hal-ku-dhegyada kala-duwanaanta, Sida erayadooda ay tilmaamayaan, waxay isku dayaan inay kala soocaan astaanta kor u qaadaysa badeecada inta ka hartay tartankeeda. Sidan, waxa ay u soo saartaa sida ugu fiican inta kale ka hor. Tani waa waxa noocyada sida Telepizza ay ku sameeyaan hal-ku-dheggooda "sirta ayaa ku jirta cajiinka" habkan oo kale waxay uga tagaan daawadayaasha iyagoo rajeynaya inay ogaadaan waxa ka dambeeya alaabta waxayna sidoo kale ka dhigaan calaamad u soo baxda alaabteeda gaarka ah oo aan la barbar dhigi karin. Waa istaraatijiyad hal-ku-dheg ah oo wanaagsan oo loogu talagalay sumadaha doonaya inay ka soo muuqdaan tayada alaabtooda.
Halkudhigyo wargelin ah ayaa isku daya in ay u sheegaan daawadayaasha waxa ay calaamaddu qabato. waxa ay qabato ama badeecada ay iibiso. Haddaba, waxaa jira noocyo badan oo ka mid ah kuwa kuu sheegaya waxa ay alaabtoodu qabtaan ama ujeedooyinka ay la kulmaan ama baahiyaha ay ku qancaan. Sidoo kale waa ikhtiyaar wanaagsan haddii aadan weli u caddayn dhagaystayaashaada waxa sumaddaadu qabato iyo waxa ujeedooyinkeeda ugu muhiimsan ay yihiin suuqa. Kaliya 4 kelmadood waad ku samayn kartaa wax shaki ahna kama gelin qof kasta oo xiisaynaya badeecadaada ama astaantaada gaarka ah.
u baahan jihayn
Waxaa jira halkudhegyo kuwaas waxaa si gaar ah loogu talagalay in ay dadweynaha u sheegaan baahiyaha la daboolay marka alaabtaas gaarka ah la isticmaalo. Tusaale cad oo aad si fiican u fahmi karto waxa weeye waxa uu sameeyo Kit Kat, oo ah astaanta soo saarta shukulaatada, waxa ay caan ku tahay hal-ku-dheggeeda “nasso, kat kat”, halkaas oo ay isku daydo in ay u sheegto macaamilka in badeecadani ay lagama maarmaan tahay haddii waxaad qaadanaysaa nasasho u dhaxaysa nidaamka caadiga ah iyo kuwa caadiga ah. Hab wanaagsan oo lagu dhiirigaliyo dadweynaha inay isticmaalaan iyo sidoo kale sabab wanaagsan oo sidaas loo sameeyo.
dadwaynaha u janjeedha
Ugu dambayn, laakiin ugu yaraan, waxa jira hal-ku-dhegyo ama magacyo ka hadlaya oo keliya dhegaystayaashooda. Tani waa waxa dhaca marka aan aragno xayeysiis halkaas oo sumadda loogu talagalay qaybta qurxinta ama cadarka. Sababtan awgeed, waxay naqshadeeyaan hal-ku-dhegyo uu macaamilku aad ugu dhex jiro. Intaa waxaa dheer, hal-ku-dhegyadani waa hab wanaagsan oo lagu soo jiidan karo dareenka dadweynaha sababtoo ah waxay kuu sheegaan qofka ugu horreeya ee loogu talagalay, si dhegeystaha ama daawadayaasha uu u soo jiito badeecada gaarka ah.
Waxaa jira noocyo badan oo halkudhigyo ah, laakiin liiskan yar waxaan ku soo darnay kuwa ugu habboon.
Halkudhigyadu waxay ku jireen warshadaha xayeysiiska muddo dheer waxaana si isa soo taraysa ay u dalbanayaan magacyo badan. Waxaa jira xitaa magacyo taariikhda galay ama suuqa iska dhigay iyadoo ay ugu wacan tahay naqshadda halku dhigyadooda. Haddaba, hal-ku-dhegga wanaagsani waa inuu ka soo bilowdaa qaar ka mid ah talooyinka aan soo jeedinnay. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in aad xisaabta ku darsato oo ay ka sii sarreeyaan wax kasta oo lagugu dhiirigaliyo oo la ogeysiiyo ka hor intaadan samaynin. Waxaan rajeyneynaa inaad wax badan ka baratay hal-ku-dhigyada iyo inay kuu noqon doonto tix-raac si aad adigu u abuurto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sida loo sameeyo halhays